ကမ္ဘာတစ်လွှားက ထူးထူးခြားခြား လူသတ်လက်နက် ၇ ခု | Buzzy
ကမ္ဘာတစ်လွှားက ထူးထူးခြားခြား လူသတ်လက်နက် ၇ ခု
တက္ကဆတ်ပြည်နယ်က လူတစ်ယောက်ဟာ သင်းအုပ်ဆရာကို လျှပ်စစ်ဂီတာနဲ့ မသေမချင်း ရိုက်သတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
Xbox 360 ဂိမ်းစက်
ဖလော်ရီဒါမှာ အမျိုးသမီးကို ရိုက်နှက်ခံရတဲ့ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ သေဆုံးနေတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ် ။ သူမကို သတ်သွားတဲ့ လူသတ်သမားဟာ ဂိမ်းစက်နဲ့ သတ်သွားတာပါ ။
တက္ကဆက်ပြည်နယ်မှာ တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတစ်ယောက်ဟာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ. ဒေါက်ဖိနပ်နဲ့ အသတ်ခံခဲ့ရပါတယ် ။ ပါမောက္ခကို ခေါင်းနဲ့ လည်ပင်းမှာ အပေါက်ရာ ၁၅ ခုနဲ့ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
ဇွန်းနဲ့ လူသတ်လို့ရတယ်ဆိုတာကတော့ မယုံနိုင်ဖွယ်ရာပါပဲ ၊ ဟုတ်ပါတယ် ၊ ဖလော်ရီဒါက အကျဉ်းထောင်မှာ အကျဉ်းသားဟာ အစောင့်ကို ၁၉၈၀ ခုနှစ်က သတ်ခဲ့မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် ၊ မသတ်ခင်မှာတော့ ဇွန်းကို ချွန်ထွက်နေအောင် သွေးထားခဲ့ရတာပါ။
စာရေးရာမှာ သုံးတဲ့ ဘောပင်နဲ့ လူသတ်လို့ရပါသတဲ့ ဟူးဆိုတဲ့ မြို.က သဝန်တိုတက်တဲ့ ချစ်သူကောင်လေးဟာ သူရဲ. ကောင်မလေးကို ဘောပင်နဲ့ ထိုးသတ်ခဲ့ပါတယ် ၊
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ ဒူဘလင်းမြို.က ဆေးရောင်းတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ အသက် ၈၁ နှစ်အရွယ် အဘိုးအိုတစ်ယောက်ကို လက်ဝါးကပ်တိုင်နဲ့ ရိုက်သတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဝါရှင်တန်က အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ ရည်းစားနဲ့ ရန်ဖြစ်စကားများရာက သူမရဲ. ရင်သားနဲ့ ဖိပြီး အသက်ရှုကြပ်အောင် ပြုလုပ်ခံရပြီး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ သင့်ရည်းစား/မိန်းမက ကိတ်တယ်ဆိုရင်တော့ သတိထားသင့်ပါပြီ ၊ သူစိတ်ဆိုးအောင် သွားမလုပ်နဲ့ပေါ့
Source : life
နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် အောက်က facebook ခလုပ်ကိုနှိပ်ပြီး သင့် facebook မှာ share လုပ်ပေးပါဦး
အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ဆဲလ်ဖီမရိုက်ခင် ဘာကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို သတိထားသင်တယ် ဆိုတာကို သက်သေပြနိုင်မယ့် ဓါတ်ပုံ တွေ
ချက်ရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ ကျန်းမာရေးကောင်းမကောင်း ကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်
အဖေဖြစ်သူရဲ့ ဂရုစိုက်ခံရဖို့ရည်ရွယ်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ ထောင်ထဲမှာ၁၀ရက်လောက်နေခဲ့ရတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေး
ကလေးကိုးယောက်နဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုထားခဲ့ပြီး အွန်လိုင်းမှာတွေ့တဲ့အမျိုးသားနောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး
ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ချစ်သူစုံတွဲတိုင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်က ဘာများဖြစ်မလဲ?
ဇာတ်ဆောင်ဝတ်စုံတွေ ဝတ်ဆင်ပြရင်း တစ်ဖန်ယုံကြည်မှုပြန်ရလာခဲ့တဲ့ လူပုအမျိုးသမီးလေး
ကွန်ပျူ တာမ၀ယ်ခင် ကြို တင်လေ့လာသင့်သည့် အချက်များ